बलिउड Archives - Naaulo Dhun
भारतीय मुलका बेलायती उद्योगपति तथा अभिनेत्री शिल्पा सेट्टीका श्रीमान राज कुन्द्रा अहिले प्रहरी हि’रासतमा छन्। पो’र्न भिडिओ बनाएको आरोपमा उनीमाथि यतिबेला अनुसन्धान भइरहेको छ। उनको पक्ष र विपक्षमा धेरैले आफ्ना भनाइहरु पनि राखिरहेका छन्। शिल्पा आफैंले आफ्ना पतिमाथि लागेको आरोप ग’लत भएको बताएकी थिइन्। उनले राजले का’मु’क चलचित्र बनाएको र यो चलचित्र पो’र्न नभएको उनको… Continue reading शिल्पाले खुशी दिन सकिन भन्दै राज शार्लिनकोमा पुग्ने गरेको खुलासा, राज कुन्द्रा ज’ब’र्ज’स्ती चु’म्बन गरे !
एजेन्सी । सेलिब्रेटी ट्यागको साथ स्टारडम पनि आउँछ। तर कहिलेकाँही स्टारहरुले पनि ठूलो नामको बोझ सहनु पर्छ। कहिले काँही अनावश्यक ट्रोल बन्नु पर्छ । धेरै चोटि बनावटी कथाहरू प्रस्तुत गरेर कलाकारका विरुद्ध वातावरण सिर्जना हुन्छ। बलिउड अभिनेता सलमान खान भाई अरबाज खानको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा आफ्ने बारेमा खुलासा गरे । एक जना महिलाले दुबईमा सलमान… Continue reading दुबईमा सलमान खानको १७ वर्षकी छोरी र श्रीमती रहेको दाबी !
अभिनेता दिलीप कुमार को निधनपछि श्रीमती सायरासँग बसेका शाहरुख खानको तस्बिरले दुनियाँलाई भावुक बनायो
अभिनेता दिलीप कुमार निधनपछि श्रीमती सायरासँग बसेका शाहरुख खान
काठमाडौं । बलिउडका दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को नि’धनले प्रशंसकहरुलाई ठूलो चोट पुर्याएको छ। उनकी श्रीमती सायरा बानो पूर्ण रूपमा छियाछिया भएकी छिन् । यो कठिन समयमा, धेरै व्यक्तिहरू सायरालाई सान्त्वना दिन पुगेका छन् । उनलाई सान्त्वना दिन अभिनेता शाहरुख खान, जसलाई दिलीप कुमारले आफ्नो छोराको रूपमा मान्थे, उनी पनि पुगेका छन् । दिलीप साहबको… Continue reading अभिनेता दिलीप कुमार को निधनपछि श्रीमती सायरासँग बसेका शाहरुख खानको तस्बिरले दुनियाँलाई भावुक बनायो
बलिउडका चर्चित नायक आमिर खानले दोस्री पन्ती किरण रावसँग विवाह भएको १५ वर्षपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । दुई जना मिलेर एक अर्काबाट टाढीने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरुको १ छोरा छन् । उनीहरुबीच छोरा आजादको हेरचाह दुवै मिलेर गर्ने सहमति भएको छ । तर, आमिर र किरणको सम्बन्ध विच्देछ भइरहदाँ सामाजिक सञ्जालमा भने अभिनेत्री… Continue reading आमिर र किरण अलग भएसँगै फतिमालाई बधाईको ओइरो
प्रेरणाको स्रोत : यी कलाकार जो गरिबीसँग जुध्दै सफल भए
बलिउडमा यस्ता यस्ता प्रतिभा छन् । जसको हामीले बयान गर्दा समेत कमी हुन सक्छ । केही यस्ता प्रेरणाका खानिका रूपमा छन् । यहाँ यस्ता प्रतिभाहरू छन् जसमा गायिका, निर्देशक, साउथ इन्डस्ट्रीका नायक, बलिउड इन्डस्ट्रीका नायक, हास्य व्याङ्यकार, व्यवसायी, निर्देशकहरू जो कोही पनि प्रेरणाका खानिका रूपमा छन् । यसैबिच यहाँ यस्ता व्यक्तिहरूको चर्चा गर्दै छौं, जसले… Continue reading प्रेरणाको स्रोत : यी कलाकार जो गरिबीसँग जुध्दै सफल भए
यतिबेला टिकटकमा निकै भाईरल ‘पानी पानी…’गित सफल हुनुको कारण ज्याकलिनले खुलाइन – यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्
मुम्बई : यतिबेला टिकटकमा एउटा हिन्दी गीत अत्यन्त भाइरल छ ।भारतीय गायक बादशाह तथा गायिका आस्था गीलको स्वरको ‘पानी पानी…’ गीत अहिले यूट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङमा समेत दोस्रो स्थानमा छ । तीन साताअघि यूट्यबुमार्फत सार्वजनिक भएको ३ मिनेट ११ सेकेण्ड लामो उक्त गीतले छोटो अवधिमै १७ करोड भन्दा बढी भ्यूज पाइसकेको छ ।उक्त गीतलाई भाइरल बनाउने… Continue reading यतिबेला टिकटकमा निकै भाईरल ‘पानी पानी…’गित सफल हुनुको कारण ज्याकलिनले खुलाइन – यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्
Categorized as बलिउड, भिडियो
भाइरल भयो रनवीर सिंहको फोटोसुट
बलिउड अभिनेता रनवीर सिंहको चर्चा फिल्म क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। आफ्नो अनौठो फेसन लुक्सबाट प्रशंसकलाई चकित पारिरहने उनी फेरि नयाँ फोटोसुटका कारण भाइरल भइरहेका छन्। बुधबार रणवीरले इन्स्टाग्राममा गुच्चीको फोटो सुटमध्येको आफ्नो एउटा फोटो पोस्ट गरेका थिए। उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको द इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ। फोटोमा रनवीर निलो रङको ट्रयाकसुट र सुनको हारमा सजिएका देखिन्छन्। उनले खुट्टामा पहेलो रङको… Continue reading भाइरल भयो रनवीर सिंहको फोटोसुट
कट्रिना कैफले दाइ बनाउन खोज्दा रिसाएका थिए अक्षय कुमार
अभिनेता अक्षय कुमार र अभिनेत्री कट्रिना कैफ बलिउडका चर्चित अन–स्क्रिन जोडीका रुपमा चिनिन्छन्। ‘वेलकम’, ‘नमस्ते लन्डन’, ‘सिंह इज किङ’ जस्ता हिट फिल्ममा सँगै देखिएका यी दुई कलाकारका केमेस्ट्री दर्शकले मन पराउँदै आएका छन्। फिल्ममा धेरैजसो रोमान्टिक जोडी भएर अभिनय गरेका कट्रिना र अक्षयको वास्तविक जीवनमा पनि राम्रो मित्रता छ। तर, कुनै समय कट्रिना अक्षयसँगको सम्बन्ध… Continue reading कट्रिना कैफले दाइ बनाउन खोज्दा रिसाएका थिए अक्षय कुमार
एजेन्सी भारतका प्रख्यात कमेडियन कपिल शर्माले नवजात छोरो त्रिशानको तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् । पत्नी गिन्नीले छोरा पाएको पाँच महिनापछि कपिलले आइतवार अन्तर्राष्ट्रिय पिता दिवसको अवसरमा छोरोको तस्वीर सार्वजनिक गरेका हुन् । छोरी अनायरा र छोरो त्रिशानलाई सँगै राखेर कपिलले तस्वीर सार्वजनिक गरेका हुन् । त्रिशान सेतो टीशर्ट, नीलो जीन्स र टोपी लगाएर क्युट देखिन्छन्… Continue reading कपिल शर्माले सार्वजनिक गरे छोरा त्रिशानको तस्वीर
बलिउड स्टारको झगडाले कयौं पटक उनीहरुको प्रोफेसनल जीवनमा पनि असर परेको देखिन्छ । केही कलाकार एक अर्कासँग यसरी रिसाएका छन् कि एकसाथ काम गर्न पनि उनीहरु तयार छैनन् । को–को कलाकारलाई एक अर्कासँग काम गर्न आपत्ति रहेको छ । जसको चर्चा अहिले गर्न खोजिएको छ । सलमान र दीपिका :सलमान खान र दीपिका पादुकोण एकसाथ… Continue reading एक अर्कासँग काम गर्न नचाहने यी हुन् बलिउड स्टार